Dowlada federalka Soomaaliya oo ka hadashay duqeyn ka dhacday degmada Saakow - Awdinle Online
Dowlada federalka Soomaaliya oo ka hadashay duqeyn ka dhacday degmada Saakow
February 23, 2020 (Awdinle Online) –War Saxaafadeed ay soo saartay Wasaarada Warfaafinta dowlada federalka Soomaaliya ayaa loogaga hadlay duqeyn ka dhacday degmada Saakow oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe.
War Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa Ciidanka Dowladda Mareykanka (AFRICOM) ay duqeyn ka gaystay magaalada Saakow ee dhacda gobolka Jabbuda Dhexe ee Soomaaliya.
Halkan hoose ka aqriso war saxaafad
Duqeyntan habeysan ayaa lagu dilay labo ka mid ah madaxda sare ee Al-shabaab halka mid kale na lagu dhaawacay iyada oo lagu baabi’iyey xero ciidan oo ay Al-shabaab halkaa ku lahayd.
DFS iyo Ciidamada Dowladda Mareykan ee AFRICOM ayaa qaadaya tallaabooyin dheeri oo ay uga hortagayaan waxyeellada shacabka marka lala dirirayo argagaxisada Al-shabaab iyada oo si buuxda loo baarayo eedayn walba oo soo baxda. Duqeyntan iyada ah ma jirto cid shacab ah oo wax ku noqotay hubintii la sameeyey.
Duqeyntan waa mid ahmiyad leh maxaa yeelay waxay na tusinaysaa in haweenku ka mid noqon karaan Al-shabaab. Haweenku kuwooda ka shaqeeya shabakadda Amniyaatka ama u fududeeya adeegyada kale waa Al-shabaab.
Dumarka waxaa lagu dirqiyaa inay ku biiraan Al-shabaab iyada oo la cabsi gelinayo ama xoog loo sheeganayo si ay u xambaaraan afkaarta gurracan ee Al-shabaab. Soomaaliya iyo bahwadaagteeda way ka go’antahay la dagaalanka argagaxisada Al-shabaab iyada oo aan loo aabayeelayn jinsi, si markaa looga hortago dhimashada dadweynaha aan waxba galabsan ee leh rag, dumar iyo caruurta Soomaaliyeed ba iyo waliba dalalka deriska ah Soomaaliya.
Dadaaladan aynu wadno ayaa looga gol-leeyahay ka hortagga iyo ilaalinta dadka rayidka, waxayna ka geddisantahay weerarada aan loo meel dayin ee ay Al-shabaab ku beegsadaan had iyo jeer meelaha shacabka ku badanyahay ee ku yaalla Soomaaliya.
Duqeyntan iyo iska caabintii ay sameeyeen Ciidanka Xoogga Dalka , ciidanka daraawiishta iyo ciidanka Danab ee ku sugan magaalada Sabiid ayaa waxay calaamad u tahay sida muwaadiniinta Soomaaliyeed, DFS iyo bahwadaagtooda Soomaaliyeed ay u meelmarinayaan caddaalad marinta kuwa dabandaabyada iyo argagaxa ku haya dadka Soomaaliyeed.
Previous articleDhageyso:-Madaxweyne Lafti-gareen oo Xariga ka jaray waddo Laami ah
Next articleGu. ku-x. arrimaha bulshada G.Hiiraan “Barakacyaasha markii hore waxay ahaayen 30 kam hada 100 ayay ku dhow yihiin”